Complaint / Claim » သံတွဲမြို့က လူဆိုးတွေ ၀ိုင်းပယ်ကြပါစို့	18
ထိရောက်တဲ့အရေးယူ၊ တားဆီးတဲ့လုပ်ဆောင်မှုမျိုဲးပုလုပ်ပေးပါရန် ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားသူ ဥက္ကဌ ခ.ယ.က 043.65224/ 09.49265118
View all posts by win win 11 win win 11 →	Blog
myanmarcitizen says: မင်းpost ကို comment မပေးတော့ဘူးလိုကနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ မင်းရေးတဲ့အထဲမှာ ကျိန္တလီ ဆိုတာပါလာလို့ ရေးလိုက်တယ်။
kai says: ဒီအထဲ.. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွတ်စွဲချက်တွေပါနေပါတယ်…
မိုးတိမ် says: ဖျက်သင့်တဲ့ ပို(စ့်)တစ်ခုပါ သူကြီးရေ…
ကြောင်ဝတုတ် says: ဖျက်ပစ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်သဂျီးရေ….
Foreign Resident says: သူရေးတာနှင့်ပဲ ၊ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး ၊
ဆူး says: ဒါကြီးက ပစ်စာ သက်သက်လို့ ထင်တယ်။ ဒီလောက် ဆိုင်ရာနာမည်တွေ တိတိကျကျ သိနေတယ် ဆိုရင် သက်သေ အနေနဲ့ ၀င်ပါလို့ ရနေတာပဲ..
ကိုရင်မောင် says: ကိုနာဂရရေ သံတွဲ ဇာတ်လမ်းတပုဒ်တော့တက်လာပြန်ပြီဗျို…….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 131
SkyHeart WinKo says: တစ်ဖတ်မှာ အားလုံးအတွက် အသေအလဲကြိုးစားနေချိန်မှာ အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးတဲ့ ကုလါးဘဲဖြစ်ဖြစ် ရခီးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူမဆို သတ်ကြကွာ သေကြကွာ တကယ်လုပ်ရမည့်ဟာတော့ ဘယ်သူမှလါပြီး အသေမခံကြဘူး။
ဝေးလွင့်တိမ် says: SkyHeart WinKo ရေ ရခီးဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ရုတ်သိမ်းပေးပါ။ ရခိုင်လူမျိုးတွေအသည်းခိုက်အောင်နာတဲ့စကားမို့လို့ပါ။ ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် နားလည်ပေးပါ။ win win 11 win win 11 တင်ထားတဲ့ပိုစ့်မှာ အခြားအချက်တွေကိုတော့ စိတ်လဲမ၀င်စားပါဘူး ဒါပေမယ့် မီးသင်္ဂြိုလ်စက် အကြောင်းပြပြီးမီးကွင်းလုပ်တယ်ဆိုတာကြီးတော့ သိပ်သဘောမကျလှဘူး .. ။ ဒါဆို ဓါတ်ဆီဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူတွေက မီးရှို့လို့လွယ်အောင် ဓါတ်ဆီစုထားတာလို့ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီဗျ .. ။ တစ်မြို့လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ မီးသဂြိုလ်စက်လေးကိုတော့ မဖျက်ဆီးပါနဲ့ဦးဗျာ .. ။ အခုမှ မြို့ခံတွေကြိုးစားထားသမျှ အကောင်အထည်ပေါ်ယုံလေးပဲရှိပါသေးတယ်။
three colors says: မန်းဒလေး ဂဇက်ဆိုတာမဟုတ်တာတွေ မှန်းသမ်း ရမ်းရေးပြီး post တင် လှူံ့ဆော်တဲ့ site ကြီးဖြစ်နေပြီ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 114
ကိုသင်း says: ဒိပိုစ့်က ဖျက်သင့်ပါတယ် အန်တရယ်ရှိတယ်လို့ လည်းထင်ပါတယ်။
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ကျနော် ဒီစာကို Myanmar Muslim Net မှာစတင်ထားတာ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ဒါဟာ သတင်းတပုဒ်ဆိုတာထက်
kai says: သံတွဲသားကိုယ်တိုင်ရဲ့မှတ်ချက်ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်… အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့.. ပို့စ်ကိုပိတ်ပါမယ်နော….
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: ကောင်းတယ်ဗျာ သူကြီးရေ။တစ်ချို့ သူတွေ အတွက်ကြောင့် သူကြီးကို
shwe pont says: ဒေသငြိမ်းချမ်းရေးကို အဲသလောက်တောင် အမှန်တကယ်လိုလားပါလျက်၊
SkyHeart WinKo says: (အရေးမကြီးပါ)
SkyHeart WinKo says: ဝေးလွင့်တိမ် says:
ကြောင်ကြီး says: သံတွဲမှ သတင်းပေးသူကတော့ ကျော်ကျော်(ခ) ထွန်းသန့်ကျော်(ခ)ပွကြီး(ခ)ပါလေရာ(ခ)